टुँडिखेलको भुइँचालो थुम्को, थुम्कोमा फुरफुर पुतली :: Setopati
टुँडिखेलको भुइँचालो थुम्को, थुम्कोमा फुरफुर पुतली
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, मंसिर १२
भुइँचालोपछि टुँडिखेलमा थुपारिएको भग्नावशेष अहिले हरियाली थुम्कोमा परिणत भएको छ। बिहीबार यही थुम्कोमाथि डोजर चलाइँदै। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
अतिक्रमणले टुँडिखेल बिग्रेको, भत्केको कुरा हामीले धेरै गर्‍यौं। आज अलि फरक कुरा गर्दैछु।
टुँडिखेलको सबै अतिक्रमण नराम्रो छैन। २०७२ को भुइँचालोपछि एउटा यस्तो अतिक्रमण भयो, जुन त्यति बेला हामीलाई नराम्रो लागेको थियो। यस्तो के गरेको होला भनेर दिक्क मान्दै नाक खुम्च्याएका पनि थियौं। आज त्यही अतिक्रमणले टुँडिखेलको एउटा भागमा ‘चार चाँद’ थपेको छ। यसलाई सपार्ने, सजाउने हो भने सम्पूर्ण टुँडिखेलको ‘ल्यान्डस्केप’ नै बेग्लै हुन्छ।
म कुरा गर्दैछु, भुइँचालो थुम्कोको।
अब सोध्नुहोला, टुँडिखेलमा भुइँचालो थुम्को कहाँ छ? म भन्छु नि कहाँ छ!
तपाईं भद्रकाली मन्दिरअगाडि उभिएर टुँडिखेलतिर हेर्नुस् त, के देख्नुहुन्छ?
सेनाले खेल मैदान र पार्टी प्यालेस बनाएको भू–भागतिर हेर्ने भनेको होइन नि। अर्कोपट्टि खुला भागतिर, जहाँ टुँडिखेलको एकचौथाइ हिस्सा जोगिएर बसेको छ।
टुँडिखेलको यो दक्षिण–पूर्वी कुनामा, भद्रकाली मन्दिरको एकदमै नजिक एउटा सानो थुम्को देखिन्छ। कतिले यो थुम्को कसरी बन्यो भन्ने पनि बिर्सिसके होलान्! भुइँचालोअघि काठमाडौं नआएकाहरूलाई त यो थुम्को परापूर्वकालदेखि टुँडिखेलकै हिस्सा थियो कि भन्ने लाग्न सक्छ।
यसको कुनै नाउँ छैन, तर उद्गम कथासँग जोडेर नामकरण गर्ने हो भने ‘भुइँचालो थुम्को’ नै बेस होला। स्थानीयकरण गर्दा ‘तिच्वः’ भन्दा हुन्छ। नेवार भाषामा ‘तिंख्यः’ भनेको टुँडिखेल, ‘तिंच्वः’ भनेको टुँडिखेल चुचुरो।
पहिले उद्गमको कुरा गरौं।
२०७२ वैशाखको भुइँचालोले धरहरा ढल्यो, सुन्धारा वरिपरिका केही घरहरू माटोमा मिले। त्यति बेला रातारात सुन्धारा क्षेत्रको भग्नावशेष पन्छाएर टुँडिखेलको यही दक्षिण–पूर्वी कुनामा थुपारियो।
झन्डै पाँच वर्षको झरी–बर्खा, हिउँद–गर्मीले त्यो भग्नावशेष आज स्थायी थुम्कोमा परिणत भएको छ। अचेल यहाँ फोहोर थुप्रिएको आभाष हुँदैन। लगभग पूरै थुम्कोलाई हरियो घाँसले ढाकेको छ। सानातिना बुट्टयानहरू छन्। कीराकिरी र एकाध पुतलीहरूले बासस्थान बनाएका छन्।
मैले यही बाटो ओहोरदोहोर गर्दा पनि यो थुम्को यति सुन्दर भइसक्यो भन्ने ख्याल गरेको थिइनँ। अघिल्लो शनिबार ‘मुक्त टुँडिखेल’ अभियानमा जाँदा ‘स्ट्यान्ड–अप कमेडियन’ लेखमणि त्रितालले मेरा आँखा खोलिदिए।
उनले त्यही थुम्कोतिर इंगित गर्दै भने, ‘पछाडि हेर्‍यो आर्मी, अगाडि पनि आर्मी देखिएला भनेर पहाडले छेकिदिएको छ।’
‘कसले भन्छ नेपालमा विकास छैन,’ उनले थपे, ‘रातारात बाटो पिच हुन्छ, पहाड बन्छ। दुई–चार वर्षमा हेर्नुस्, हिउँ पर्छ त्यो पहाडमा।’
उनले व्यंग्य गरेर भने पनि कुरा साँचो हो। यो थुम्कोले सेनाको ब्यारेक सर्लक्कै छोपिदिएको छ। दुई–चार वर्षमा यहाँ हिउँ पार्न त सकिन्न, तर टुँडिखेललाई खुला सार्वजनिक पार्क बनाउँदा यो थुम्को महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नसक्छ।
त्यसै दिन अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन आएका पत्रकार कनकमणि दीक्षित भन्दै थिए, ‘यो थुम्को हामीले खेर फाल्न हुन्न है, यसलाई भुइँचालोको सम्झनाका रूपमा जस्ताको तस्तै संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ।’
उनले यसो भनिरहँदा मेरा आँखा त्यतैतिर गए। केही युवा–युवती माथि चढेर फोटो खिच्दै थिए। म नजिक गएँ। पोथ्रापोथ्रीको घारी राम्ररी नै झांगिसकेछ। मान्छे अक्सर यहाँ आउँदा रहेछन् र थुम्को चढ्दा रहेछन् भन्ने डोबहरूले छर्लंगै पार्थ्यो। साना नानीबाबुहरूका लागि त रमाइलै ‘क्लाइम्बिङ’ होला!
दीक्षितले भनेजस्तै भुइँचालोको यो अवशेष हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि अब हामीबीच छ। डोजर चलाएर यसलाई सम्याउन नसकिने होइन। तर, किन सम्याउने? किन यसलाई सहरको सौन्दर्य बढाउने गरी सदुपयोग नगर्ने?
म त्यति बेला छक्क परेँ, जब सारा टुँडिखेलको अतिक्रमण छाडेर काठमाडौं महानगरले बिहीबार यही थुम्कोमाथि डोजर चलायो। बसपार्क हटाउने काम सिंगै बाँकी छ, पसलहरू चलिरहेकै छन्, अतिक्रमण गरी बनाइएका अन्य संरचना पनि जस्ताका तस्तै छन्। यतिका काम थाती राखेर महानगरले भने सिधै यही निरीह थुम्कोमाथि आक्रमण गर्‍यो, जसले हामीलाई भुइँचालो सम्झाउँथ्यो।
अब तपाईंहरू भन्नुहोला, चउरछेउको यो थुम्को हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने? म भन्छु नि कसरी गर्ने!
सिंगापुरको चांगी विमानस्थलमा चारैतिर सिसाले बारेको सानो ‘ग्रिनहाउस’ छ। चाँडै विमानस्थल पुग्नुभयो, वा केही समय ‘ट्रान्जिट’ मा बिताउँदै हुनुहुन्छ भने यो ग्रिनहाउस छिर्न नबिर्सनुहोला। यो पुतली बगैंचा हो। यहाँ ४७ जातका पुतली पाइन्छन्। छ मिटर अग्लो चट्टानको कृत्रिम ढिस्कोबाट कृत्रिम झरना झरझर झर्छ। चारैतिर हरियाली छ। मगमगाउँदा फूलहरू छन्। तिनै फूलमा रस चुस्दै उडिरहेको पुतली घरि तपाईंको शिरमा आएर बस्छ, घरि हत्केलामा। आफूजस्तै रंगीबिरंगी पुतलीसँग खेल्न पाउँदा नानीबाबुहरू फुरूंग पर्छन्।
इन्डोनेसियाको बाली, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईदेखि संसारका विभिन्न सहरमा यस्ता पुतली बगैंचा छन्, जहाँ केटाकेटीलाई पुतलीको जीवनचक्र सजीव ढंगमा बुझाउन सकिन्छ।
टुँडिखेलको यो भुइँचालो थुम्कोलाई हामी सिंगापुर, बाली वा दुबईको जस्तै ‘पुतली बगैंचा’ का रूपमा विकास गर्न सक्छौं, जसले रंगशालादेखि रानीपोखरीसम्म फैलिने विशाल टुँडिखेल पार्कको ‘ल्यान्डस्केप’ अर्कै बनाइदिन्छ।
मैले पुतली विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. भैया खनालसँग यसको सम्भावनाबारे कुराकानी गरेँ।
उनी आइडिया सुनेर खुसी भए, त्यसपछि कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनी केलाउन थाले।
अहिलेकै अवस्थामा पुतलीलाई यहाँ बास बनाउन गाह्रो रहेछ। उनी भन्दै थिए, ‘व्यस्त सडकको छेउमै भएकाले सवारी साधनको टाइँटुइँ र धूलोधुवाँको बीचमा पुतली सप्रँदैन।’
पुतलीजस्तै सहरको टाइँटुइँ र धूलोधुवाँले हाम्रा नानीबाबुको हुर्काइमा कति ठूलो प्रभाव पारिरहेको होला! उनीहरू पनि पुतलीजस्तै त हुन्!
जसरी हामी केटाकेटीलाई सहरी कोलाहल र प्रदूषणबाट जोगाएर राख्छौं, त्यसैगरी जोगाउने हो भने पुतली सपार्न नसकिने होइन।
यसको निम्ति सिंगापुरको ग्रिनहाउसजस्तै थुम्कोलाई सिसाले बारेर बाहिरी वातावरणबाट अलग्याउन सकिन्छ। र, भित्र पुतलीहरूले घर बनाउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ।
यो ‘आइडिया’ कार्यान्वयन गर्न प्राध्यापक खनालले केही उपाय सुझाए।
सबभन्दा पहिला त, रत्नपार्क वा भृकुटीमण्डपको कुनै क्षेत्रमा पुतलीको बासस्थानमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। रत्नपार्कलाई नमूना मानेर सम्पूर्ण टुँडिखेल क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता पुतली हुर्कन सक्छन् भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनुसन्धान गर्न अप्रिल मध्यदेखि जुलाई अन्त्यसम्म उपयुक्त हुन्छ। यो पुतली सप्रने याम हो।
उनका अनुसार नेपालमा ६ सय ६० जातका पुतली पाइन्छन्। संसारकै विरल प्रजाति पनि छन्। मान्छेजस्तै पुतलीहरूको स्वभाव र खान्की फरक हुन्छ। कुनै जिन्दगीभरि एउटै फूल वा वनस्पति खाएर बाँच्छ। कुनैले दुई–तीनथरीको वनस्पति पचाउँछ। कुनै हामीसँगै सहरको बीचमा बाँच्छ, कसैलाई बाँच्न घना जंगल नै चाहिन्छ।
पुतलीहरूको जीवन एकदमै छोटो हुन्छ। वर्षको तीन साता मात्र निस्कने पुतली पनि हुँदो रहेछ, तपाईंलाई थाहा थियो?
थरीथरीका पुतलीमध्ये केही प्रजाति सहरी क्षेत्रमा हुर्कन सक्छन्। तिनलाई रत्नपार्कमा अनुसन्धान गरेर यो थुम्कोमा सार्न सकिन्छ। ग्रिनहाउसको सानो ठाउँमा धेरै जातका पुतली हुर्काउन भने गाह्रो हुँदो रहेछ। जीव सानो भए पनि प्रतिस्पर्धा ठूलो हुन्छ रे, खनालले भनेका। बाँच्नलाई संघर्ष गर्ने गुण चाहिँ मान्छे, पुतली सबैमा उस्तै!
‘पूरै टुँडिखेलको कुरा गर्ने हो भने धेरै जातका हुर्कन सक्छन्,’ खनालले भने, ‘यही थुम्कोमा मात्र पाँच–सात प्रजातिसम्म सकिएला।’
कस्ता–कस्ता प्रजाति हुर्कन सक्छन् त यहाँ?
जिन्दगीका ३५ वर्षभन्दा बढी कीराकिरी केलाएर बिताएका उनले केही नाउँ सुझाए — पेल ग्रास ब्लू, कमन मर्मन, इन्डियन टरटोइज शेल, क्याबेज ह्वाइट आदि।
तपाईं चिन्नुहुन्छ यी पुतली?
‘पेल ग्रास ब्लू’ भनेको घाँस माथिमाथि उड्ने सानो पुतली हो। ‘कमन मर्मन’ कालो हुन्छ, जसको जीउमा सेता साना थोप्ला हुन्छन्। ‘क्याबेज ह्वाइट’ भने सेतो हुन्छ, जसको पखेटाको टुप्पोमा काला थोप्लाहरू हुन्छन्। ‘इन्डियन टरटोइज शेल’ भनेको काठमाडौंका धेरै भागमा पाइने पुतली हो।
यी पुतली कस्ता हुन्छन्, तल तस्बिरमा हेर्नुस् है।
घडीको सुईअनुसार: कमन मर्मन, पेल ग्रास ब्लू, इन्डियन टरटोइज शेल र क्याबेज ह्वाइट।
प्राध्यापक खनालले अर्को प्ररेक कुरा पनि सुनाए, ‘हाम्रा केटाकेटीलाई पुतली चिन्नै गाह्रो भइसक्यो। स्कुलको किताबमा पढ्छन्, त्यत्ति हो। टुँडिखेलको यो थुम्को वा यस्तै अर्को ठाउँमा बगैंचा बनाउन सक्यौं भने सजिलैसँग पुतली चिनाउन र जीवनचक्र बुझाउन सकिन्छ।’
‘सहरकै बीचमा पुतली बगैंचा भए कति राम्रो!’ उनी खुसी सुनिए।
यस्ता अनेक उपाय हुन सक्छन्। जसरी यहाँ आउने युवा–युवतीका लागि यो थुम्को आकर्षण बनेको छ, त्यो हेर्दा ‘सेल्फी प्वाइन्ट’ का रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ।
कल्पना गर्नुस् त, हल्का उकालो बगैंचा, बगैंचामा थरीथरीका रंगीन फूल र तिनै फूललाई पृष्ठभूमिमा पारेर तपाईंको ‘पाउट’ तस्बिर! बनेन त धेरै ‘लाइक्स’ आउने सेल्फी’।
संयोगले टुँडिखेल थुम्को एक्लो छैन। केही सांस्कृतिक स्थल वरिपरि नै छन्। नजिकै गुरूमापाको रूख छ, जहाँ हरेक वर्ष ‘पाँचह्रे’ मेला लाग्छ। यही रूखनिर दुई साताअघि मुक्त टुँडिखेल अभियन्ताहरूले खरीको बोट रोपेका छन्। हामीले पुतली बगैंचा बनाउँदै गर्दा खरीको रूख हलक्कै बढ्ला। गुरूमापाको रूख पनि मौसममा झांगिएर हरियो होला।
गुरूमापा भनेका टुँडिखेलमा बस्ने राक्षस हुन्। तपाईंलाई उनको कथा थाहा छ? म भन्छु नि!
गुरूमापा राक्षसले काठमाडौंका जनतालाई साह्रै दुःख दिएछन्। भुराभुरी टपक्क टिपेर आहारा बनाउँदा रहेछन्। त्रसित जनताले उपाय झिके। गुरूमापालाई टुँडिखेलको खरीबोटमुनि बसोबासको चाँजो मिलाए। वर्षको एकचोटि सिंगो राँगोको मासु र दस पाथी चामलको भात खुवाउन थाले।
रैथाने बूढापाका अझै पनि टुँडिखेललाई ‘राक्षसको चउर’ मान्छन्। त्यो रूखको फेदमा दुइटा इँटा जोडेर राखे गुरूमापा राक्षसले छुट्टयाइदिन्छ भनिन्छ। अहिले पनि काठमाडौंमा गुरूमापाको नाम लिएर केटाकेटी तर्साइन्छ। भात खान आनाकानी गरे ‘गुरूमापा वल (आयो)’ भन्दै डर देखाइन्छ।
अब सोच्नुस् त, यस्तो सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्रमा भुइँचालो थुम्को, भुइँचालो थुम्कोमा फुरफुर पुतली!
यता पनि फुरफुर
उता पनि फुरफुर
अनि मेरो नाकमा ...
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६